Welcome to our AMA (Aye Myanmar ) page. We are providing HIV prevention and referral services, human rights information, and paralegal services to sex workers in Myanmar.
Aye Myanmar Association (AMA) isacountrywide network of sex workers, working in seven state divisions in Myanmar. The mandate and mission of AMA is to mobilise the sex worker community, build the capacity of sex workers, to reduce stigma and discrimination against sex workers, and support the sex worker community in Myanmar.
Read more About AMA
Send the messages to AMA or request more information with the form below:
အေးမြန်မာလူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ တွင်တာဝန်ထောင်ဆောင်ရန် ၀န်ထမ်းအလိုရှိပါသည်။ (1) Project Manager (1) Post ￼ JOB SUMMARY လိင်လုပ်သား (sex workers) များ၏ လူမှုဖွင့်ဖြိုးရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် လူထုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများတွင် စိတ်ဝင်စားသူ၊ စိတ်အားထက်သန်သူ၊ ရည်မှန်းချက်မြင့်မားသူ မန်နေဂျာတစ်ဦးအလိုရှိသည်။ ၀န်းထမ်းများးရဲ့ နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အပါတ်စဉ်၊ လစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် community (လူထု) အကျိုးပြု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ အဖွဲ့အစည်းမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများ၊ ရည်မှန်းချက်များပြည့်မှီအောင်အထူး ကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ JOB DUTIES – တိုးတက်အောင်မြင်သော စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုအတွက် ၀န်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ခန့်အပ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊ တွေးခေါ်မေမျှာ်မြင်မှုနှင့်အတူ သင်ကြားညွှန်ကြားခြင်း၊ စည်းကမ်းများလိုက်နာစေခြင်းတို့ကိုိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီး ၀န်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီအထိ…
Read more Job announcement for project manager post
The Global Network of Sex Workers (NSWP) Consensus Statement details eight fundamental rights that sex worker-led groups from around the world identify as crucial targets for their activism and advocacy. The statement was developed duringaglobal consultation with NSWP members, including Aye Myanmar. The Consensus Statement is an important introduction to sex work, human rights and the law.